အက်ရှလေ Zehnder ။ ခွက် Shot
တစ်ဦး Pasadena, တက္ကဆက်ပြည်နယ်အထက်တန်းကျောင်းမှာတစ်ဦးကဆရာဟောင်းတစ်ဦးအသက် 17 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဝန်ခံခဲ့သည်။
သူမတစ်ဦးအသက် 17 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့သည့်အခါ Harris ကကောင်တီအစိုးရရှေ့နေများ, အက်ရှလေဧလိရှဗက် Zehnder, 24 အရ, တစ်ဦးဇီဝဗေဒဆရာမနှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Pasadena High School မှာလက်ထောက်ရူ့နည်းပြဖြစ်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 1, 2014 တွင်, Zehnder ဖြစ်နိုင်သည်သူမ၏ကြောင်းတစ်ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတစ်ပုံပျံ့နှံ့နေတဲ့ဟောင်းဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်ခဲ့သည်ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းကိုသူမ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ voice ဖို့လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးထံသို့သွားလေ၏။
လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးကျောင်းသားများမေးခွန်းထုတ်သည့်အခါ, တစ်ဦးအသက် 17 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသူအထံတော်သို့စာပို့ထိုသူနှစ်ယောက်ဟူစတန်အတွက်သူမ၏တိုက်ခန်းမှာမေလကတည်းကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကွောငျး Zehnder တစ်ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတစ်ပုံရှိခြင်းမှဝန်ခံခဲ့သည်။
အစိုးရရှေ့နေများအဆိုအရကျောင်းသား Zehnder ရဲ့ပရိဘောဂနှင့်သူမ၏တိုက်ခန်းများ၏အပြင်အဆင်ကိုဖော်ပြရန်နိုင်ခဲ့သည်။
သူမကကောင်လေးကမှစေလွှတ်တော်မူသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားမက်ဆေ့ကိုပြသပြီးနောက် Zehnder ကျောင်းသားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမလည်းသူမအနေအထားကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ် ကလေးများပြခန်းနှင့်အတူမစင်ကြယ်သောအပြုအမူများအတွက်အဖမ်းခံရအမျိုးသမီးများနေ့ ယခင်နှစ်ပေါင်းထံမှဖမ်းဆီးမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။
Megan Mahoney ။ Facebook က
သူမကြောင့် 16 နှစ်နှင့်အတူသူမရှိခြင်းခံခဲ့ရကာစွပ်စွဲချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာပတျဝနျးကငျြဖိအားဇန်နဝါရီလအတွင်းနုတ်ထွက်မတိုင်မီ Megan Mahoney, 24, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးဆရာမနှင့် Staten ကျွန်း, နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ Moore ကကက်သလစ် High School မှာလက်ထောက်အားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် -Old ကျောင်းသား။
Mahoney ကျောင်းသားချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းပြီးနောက်နယူးယောက်ပို့စ်သတင်းစာအဆိုအရတရားရုံးကစာရွက်စာတမ်းများ Mahoney ကျောင်းကိုမြေပေါ်တွင်အပါအဝင်ကျောင်းသားနှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြ, အောက်တိုဘာလ 31, 2013 မှာ, ဇန်နဝါရီလ 9, 2014. အကြားမြောက်မြားစွာကြိမ်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စွပ်စွဲစတင်ခဲ့သည် ဘတ်စကက်ဘောသူ့ကိုကျင့်ညွှန်ကြားပေးခြင်း။
အောက်တိုဘာလမှာတော့ Mahoney ပြဌာန်းအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ 30 ရေတွက်ခြင်းနှင့်ကြောင့်သူမနှင့်ကျောင်းသားအတွက်စေ့စပ်ကြောင်းစွပ်စွဲချက်ပါးစပ်လိင်မှပြစ်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုလေးမျိုးအရေအတွက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည် "ကာလဟုပြောသည်ကာလအတွင်းတစ်လလျှင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်။ "
Mahoney, Wagner College မှဟောင်းတစ်ဦးဘတ်စကက်ဘောကြယ်ပွင့်, အာမခံခြင်းမရှိဘဲဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသူမနှင့်သူမ၏ရှေ့နေကစွဲချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ကျောင်းကအရာရှိများသူစွပ်စွဲ Mahoney အကြောင်းကိုသိလို့ကျောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်များအားလုံးထံမှသူ့ကိုဖယ်ရှားနှင့်ကျောင်းသားများနှင့်အတူအခြားအမျိုးသမီးနည်းပြရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ပေမယ့်ရဲကိုဆက်သွယ်ပါရန်ပျက်ကွက်သည့်အခါရစ်ချတ် Postiglione အောက်တိုဘာလအထိအားကစားဒါရိုက်တာနှင့် Moore ကကက်သလစ် High School မှာထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ်ကလေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးန်ဆောင်မှု။
အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ် အမျိုးသမီးများကလေးများပြခန်းနှင့်အတူမစင်ကြယ်သောအပြုအမူများအတွက်အဖမ်းခံရ ယခင်နှစ်ပေါင်းထံမှဖမ်းဆီးမှုများကိုတွေ့မြင်ရန်။
Michelle Strickland ။ ခွက် Shot
Michelle Strickland, 23, 18 နှစ်အရွယ်တီးဝိုင်းကျောင်းသားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစွပ်စွဲခံရပြီးနောက်, ဟူစတန်အတွက် Stratford High School တွင်မှာလက်ထောက်တီးဝိုင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်သူမ၏အနေအထားကနေပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအရ, ကျောင်းသားသူနဲ့ Strickland မေလ 2014 ခုနှစ်နွေဦးပေါက်ချိုးနေစဉ်အတွင်းသူ၏နေအိမ်တွင်ပြန် Stratford တီးဝိုင်းခန်းမမှာသိုလှောင်မှုခန်းထဲမှာလိင်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲ။
ကျောင်းအုပ်ကရဲနှစ်ခုအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ဖြစ်ပွားနေသောခဲ့ကြောင်းအကြံပြုဆို Strickland နှင့်ကျောင်းသားများအကြားကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်လည်သုံးသပ်။
ရေဗက္ကာ Diebolt ။ ခွက် Shot
Placentia အထက်တန်းကျောင်းဆရာမရေဗက္ကာ Eileen Diebolt, 35, 15 နှစ်အရွယ်မှာသူတစ်ဦးကယခင်ကျောင်းသားနှင့်အတူတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးရှိခြင်းစွပ်စွဲခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အဆိုအရအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အာဏာပိုင်များဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းနှင့် 2004-2008 ကနေလေးနှစ်အပေါ်သှားသော Diebolt အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စွပ်စွဲ Diebolt မိန်းမဘာသာစကားအနုပညာဆရာစဉ်အခါကစတင်နည်းပြရေကူး။
ထိုမိန်းမသည်သူတို့ Diebolt ရဲ့စာသင်ခန်းအဖြစ်သူမ၏အိမ်တွင်လိင်ခဲ့ကြောင့်ကျောင်းချိန်အပြီးနှင့်တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းရာအရပျကိုယူကြောင်းကိုအာဏာပိုင်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။
Diebolt အသက် 18 နှစ်အောက်အသက် 18 နှစ်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သံသယအပေါ်, ဇွန်လ 11, 2014 တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးက $ 100,000 နှောင်ကြိုးသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
Diebolt 2003 ကတည်းက Placentia, California မှာဗလင်စီယာ High School မှာဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်ရှိသည်။
ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မော်စီ။ Facebook က
ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မော်စီ, 39, သူမစွပ်စွဲနေတဲ့အသက် 16 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဘို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်တဲ့အခါမှာဇွန်လ 3, 2014 တွင်မှီတိုင်အောင်, Queens, New York မှာ Grover Cleveland High School တွင်မှာအထက်တန်းကျောင်းအားကစားရုံဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်အရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာသူမတစ်ဦးဗီရိုထဲမှာကျောင်းသားမှသူ့ကိုယ်သူထိတွေ့တဲ့အခါမှာဇွန်လ 2013 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသမ္မတမော်စီကျောင်းနှင့်ကျောင်းဝင်းချွတ်နှစ်ဦးစလုံး, ဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လများတွင်အနည်းဆုံး 30 ကြိမ်ကျောင်းသားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြောင်းပြည်နယ်မှပေါ်တတ်၏။
မော်စီလက်ထပ်နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းကျောင်းမှာသိပ္ပံဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ သူမသည် 1999 ကတည်းက Grover Cleveland High School တွင်မှာအားကစားရုံဆရာခဲ့သည်။
Pamela Leone ဂျုံးစ်
Pamela ဂျုံးစ်။ ခွက် Shot
Pamela Leone ဂျုံးစ်, 35, သူမ၏ခင်ပွန်းသူမကသူမ၏ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါစွပ်စွဲရုံမတိုင်မီ DeSoto တက္ကဆက်ပြည်နယ်များတွင်ပြောင်းလဲမှုစက်ရုံများအတွက်အားကစားသမားများအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဆရာမအဖြစ်သူမ၏သင်ကြားမှုအနေအထားကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် Marshals သုံးခုက 16 နှစ်အရွယ်အထီးကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလိင်ဆက်ဆံစွပ်စွဲခံရပြီးနောက်ဇွန်လ 4, 2014 တွင်ဂျုံးစ်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာများအရ, အဖြစ်အပျက်တွေမေလနှင့်ဧပြီလ 2014 ခုနှစ်တွင်ရာအရပျကိုယူ။
တစ်ဦးကစက္ကန့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကသူနဲ့ဂျုံးစ်သူမ၏အိမ်တွင်မေလ 31 ရက်နေ့တွင်လိင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ သူကသူနှင့်တစ်ဦးအသက် 19 နှစ်အရွယ်မိတ်ဆွေတစ်ဂျုံးစ်ရန်ဖိတ်ခေါ် '' အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဂျုံးစ် watched ကြောင်း '' နှစ်ခုလိင်ခဲ့စဉ်ကလေးများခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ပြောင်းလဲခြင်းစက်ရုံအိမ်များများအတွက်အားကစားသမားများ 14 13-17 နှစ်ကြားယောက်ျားလေးအဘယ်သူတရားရုံးရှိနေသောကြောင့်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာများရှိအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ကျောင်းရဲ့တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကဋ္ဌဒဲနစ် DeVaughn အဆိုအရကျောင်းသားတချို့ကျောင်းစေခြင်းငှါစေလွှတ်ခံရမီသားကောင်ခဲ့ကြသည်။
DeVaughn လည်းမိမိသားသမီးကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏နေအိမ်၏အိပ်ခန်းအတွင်းခဲ့ဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ပြီးနောက်စွပ်စွဲချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုသူ့ကိုတင်းကိုကြားပြောသောဂျုံးစ် '' ခင်ပွန်းကပြောသည်။
သူမသည်သူတို့ကိုဆောင်ဖို့။ ထိုသူတို့ကတစ်ဦးသားကောင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က ~ "တပ်ကြပ်ကြီးသူမ၏သူတို့ကိုနောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့်သူမလိုသောအရာကိုရတဲ့တစ်သားကောင်ဖြစ်ကြသည်။ ဂယ်ရီစုစုပေါင်း
သူမကဧပြီလ 14, 2014 တွင်အဖမ်းခံရနှင့်တစ်ဦးအသက် 17 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည့်အခါဂျနီဖာ Fichter, 29, Lakeland, ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ဗဟိုဖလော်ရီဒါလေကြောင်းအကယ်ဒမီမှာအင်္ဂလိပ်ဆရာမဖြစ်ခဲ့သည်။
ရဲအစီရင်ခံစာအရသားကောင်၏မယ်တော်နှိုးထသူအိမ်မှာမဟုတျကွောငျးရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်သူမ၏သားရဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျစောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့သည်။ သူမကသူမ၏သားနှင့်မိမိဆရာ, ဂျနီဖာ Fichter အကြားစာတိုပေးပို့ရေးကိုမြင်သောအခါဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်ထို့နောက်သူမကသူမ၏သားနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကြီးနှင့်သူမဆိုနောင်တရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းကိုသူမ၏တင်းကိုကြားပြောသော Fichter နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မိခင်ထို့နောက်အာဏာပိုင်များဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး Fellow ကျောင်းသားဖြစ်ဟန်ဆောင်
နိုဝင်ဘာလ 2013 ခုနှစ်မှာစတင်ကာစုံထောက် Fichter နှင့်ကျောင်းသားစွပ်စွဲထားတဲ့တိုက်ခန်းကိုရှုပ်ထွေးမှာယာဉ်ရပ်နားတွေအများကြီးထဲမှာအပါအဝင်သူမ၏ကားတစ်စီး၏ backseat အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများ 30 ကြိမ်မှလိင် 20 ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ကျောင်းသားရဲ့အမေကသူ့ကိုရှာနေကိုခေါ်တဲ့အခါ, Fichter စွပ်စွဲဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်ရန်ဟန်ဆောင်လိမ့်မယ်။
ဂျနီဖာ Fichter သူမ၏ဖမ်းဆီးအောက်ပါ $ 70,000 နှောင်ကြိုးအပေါ်ထောင်ဒဏ်ကျင်းပလျက်ရှိခဲ့သည်။
ဧပြီလ 25, 2014 တွင်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
အခြားကျောင်းသား 29 နှစ်အရွယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာမနဲ့သူ့ရဲ့စွပ်စွဲချက်ဆက်ဆံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်ပြီးနောက်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ 20 အသစ်များကိုရေတွက်ဂျနီဖာ Fichter ဆန့်ကျင်ယူဆောင်အသေးစားနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယကျောင်းသားကသူ 17 နှစ်အဟောင်းနှင့် Fichter ကသူ့အင်္ဂလိပ်ဆရာမအခါ 2011 ခုနှစ်တွင်လေကြောင်းအကယ်ဒမီမှာအငယ်တန်းခဲ့ကြောင်း Polk ရဲအရာရှိရဲ့စုံထောက်အားပြောသည်။
detect သူတို့ထဲကနှစ်ခုကိုမေလ 2011 ခုနှစ်စာသင်ခန်းပြင်ပအတူတူအချိန်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒါဆိုစာပို့စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အောက်တိုဘာလ 2011 ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးသို့တိုးတက် Fichter နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ထို့နောက်-ဆယ်ကျော်သက်စတင်ပြောကြပါတယ်။
မိမိအမိကိုမျှမရသောအခါသူတို့ကသူမ၏တိုက်ခန်းမှာနှင့်သူ၏အိမ်တွင်တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မယ်။ ဆက်ဆံရေးမေလ 2012 ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဂျနီဖာ Fichter အလားတူစွဲချက်များများအတွက်ဧပြီလ 14 ရက်နေ့တွင်သူမ၏ဖမ်းဆီးအောက်ပါ $ 70,000 နှောင်ကြိုးအပေါ်ထောင်ဒဏ်ကျင်းပလျက်ရှိခဲ့သည်။ အသစ်ကစွဲချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး Polk ကောင်တီတရားသူကြီး $ 300,000 အသစ်တစ်ခုနှောင်ကြိုးထားကြ၏။
ဇွန်လ 5, 2014 ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
2012 ၌သူ၏အင်္ဂလိပ်ဆရာမအဖြစ်ဂျနီဖာ Fitter သူတစ်ဦးကတတိယကျောင်းသားသူတို့ထဲကနှစ်ခုအဲဒီအခြိနျမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဝန်ခံခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့သြဂုတ်လ 2012 ခုနှစ်က, အချိန် 17 နှစ်အရွယ်မှာသူလူငယျတ, ကျောင်းအနီးတစ်ဦးလေဆိပ်မှာမီးပုံမှ Fichter ကိုဖိတ်ကြားပါတယ်။ ပြောပါ တစ်ချိန်ချိန်, Fichter နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လေဆိပ်မှာ FAA အဆောက်အဦ၏ခေါင်မိုးမှ သွား. လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာလေးလလောက်ဆက်ပြောသည်။
Fichter စွပ်စွဲအသေးစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဘို့ 10 နောက်ထပ်စွဲချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏နှောင်ကြိုး $ 520000 ကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်အခြား $ 150,000 ခြင်းဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဇွန်လ 17, 2014 တွင်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
သူမ Lakeland, ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ဗဟိုဖလော်ရီဒါလေကြောင်းအကယ်ဒမီမှာဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်ဂျနီဖာ Fichter တရားဝင်ကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်၏ 37 အရေအတွက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
သူကအသက် 18 လှညျ့သူမကအခြားသားကောင်အနေဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာပြီးနောက်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘို့သွားသောအခါသူမ၏လိုက်ပါသွားသည့်အခါနိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့ကဖြန့်ချိမယ့်အစီရင်ခံစာအဆိုအရ Fichter ရဲ့သားကောင်များ၏တဦးတည်းသူမ၏နှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အက်ရှလေ Casiday ။ ခွက် Shot
ဟောင်းများအဋ္ဌမတန်းအင်္ဂလိပ်ဆရာအက်ရှလေ Casiday, 31, ကလေးတစ်ဦးမှညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းထုတ်လွှင့်တွေထဲကအရေအတွက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမ 14 နှစ်အရွယ်အထီးကျောင်းသားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျစာပို့စတင်ခဲ့သည့်အခါစိန့် Clair ကောင်တီခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရစ်ချတ်မိုင်းနားအဆိုအရ, အက်ရှလေ Casiday လိဒ်, Alabama တှငျလိဒ်အလယျပိုငျး School တွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါစွပ်စွဲ sexting သို့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေဖော်ဝါရီလနှင့် Casiday သူမ၏သင်ကြားမှုအနေအထားကနေနုတ်ထွက်အတွက်စတင်ခဲ့သည်။
Casiday ဖမ်းဆီးသူမသည်တစ်ဦး $ 100,000 နှောင်ကြိုးပို့စ်တင်ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်ကနေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်သူမကမတ်လ 12, 2014. အပေါ်အာဏာပိုင်များသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ပြီးနောက်အသေးစားမှညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းထုတ်လွှင်များ၏တဦးတည်းရေတွက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
စာရာသည် Raymo ။ ခွက် Shot
သူမဇန်နဝါရီလ 14, 2014 တွင်အဖမ်းခံရနှင့်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီပြစ်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်နှစ်ခုအရေအတွက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည့်အခါစာရာအမ် Raymo, 31, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်စီးတီး, မစ်ရှီဂန်များတွင် TL နေရာလေးကိုအလယျပိုငျးကျောင်းမှာ 8th-တန်းဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
သူက 13 မှ 15 နှစ်ကြားအခါ Raymo 2012 နှင့် 2013 ခုနှစ်တလျှောက်လုံးကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစွပ်စွဲလျက်ရှိသည်။
သူမသည်တစ်ဦး $ 250,000 နှောင်ကြိုးပို့စ်တင်ပြီးနောက်လက်ရှိတွင်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 29 ရက်နေ့တွင်စတင်ကြောင်းပဏာမကြားနာစဉ်အတွင်းသားကောင်, အသက် 15 ကသူပထမဦးဆုံးသူကအချိန်က 14 နှစ်ပဲရှိသေးတယ် 2012. ၏ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းသူမ၏စာသင်ခန်းအတွင်း၌ Raymo နှင့်အတူလိင်အတွက်စေ့စပ်ကြောင်းသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
သားကောင်ကိုလည်းကြိုတင် Raymo အရက်, ဆေးလိပ်, နှင့်အစားအစာနှင့်သူမသူ့ကိုသူ့ကိုယ်သူ၏ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများကို texted ကြောင့်သူ့ကိုထောက်ပံ့လိင်ဆက်ဆံရန်စွပ်စွဲထားသည်။
သားကောင်အရသူနဲ့ Raymo ကျောင်းတွင်သို့မဟုတ် Essexville အတွက် Raymo ရဲ့အိမ်မှာဖြစ်စေ, လိင်ခြောက်လမှရှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သားကောင် Raymo အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေများကိုပြောပြသည်ပြီးနောက်ကောလာဟလများကျောင်းမှာပျံ့နှံ့နေတဲ့စတင်ခဲ့သည့်အခါစွပ်စွဲဆက်ဆံရေးဟာအာဏာပိုင်များရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမှယူဆောင်ခဲ့သည်။
ကျောင်းအာဏာပိုင်များကချက်ချင်းရဲကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်သားကောင်တစ်ဦးသားသမီးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုစင်တာမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်, Raymo ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ပထမဦးဆုံးဒီဂရီပြစ်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်နှစျယောကျကိုပိုပြီးစွဲချက်ကလေးတစ်ဦးစုစုပေါင်းဆောင်ခဲ့ Raymo ဆန့်ကျင်ယူဆောင်စွဲချက်မှထည့်ပြီးပါပြီ။ ဧပြီလ 29, 2014 ခုနှစ်တစ်ဦးကတရားခွင်ရက်စွဲ, စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါလျှင်, Raymo တစ်ဦးဘဝကိုဝါကျများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Shannon Rae Spradlin ။ ခွက် Shot
တစ်ရမ်းစွပ်စွဲနေတဲ့အသက် 17 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးမလျော်ကန်သောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခြင်းများအတွက်သူမ၏ဖမ်းဆီးဘို့ထုတ်ပေးပြီးနောက်နယူး Braunfels တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေ Shannon Rae Spradlin, 31, အာဏာပိုင်များသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်။
မတ်လ 11, 2014 တွင် Sequin High School တွင်ဆရာမတစ်ဦးပညာပေးနှင့်ကျောင်းသားများအကြားမလျော်ကန်သောဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်အတူဒုတိယဒီဂရီပြစ်မှုတာဝန်ခံအပေါ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါလျှင်သူမထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း 20 ၏အများဆုံးဝါကျနှင့် $ 10,000 ဒဏ်ငွေနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Spradlin တစ်ဦး $ 50,000 နှောင်ကြိုးပို့စ်တင်ပြီးနောက်ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။
Erica Ginnetti ။ ခွက် Shot
တစ်ဦးက Pennsylvania ပြည်နယ်သင်္ချာဆရာမကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစွပ်စွဲခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 15, 2014 တွင်, အောက်ပိုင်း Moreland မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အောက်ပိုင်း Moreland High School မှာဆရာကျောင်းမှာကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးမသင့်လျော်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့။ တစ်ဦးအစွန်အဖျားကိုလက်ခံရရှိ
သူမတစ်ဦးအသက် 17 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည့်အခါ Montgomery ကောင်တီခရိုင်ရှေ့နေရဲ့ရုံး၏အဆိုအရ Erica အမ်း Ginnetti, အသက် 33, ကျောင်းမှာသင်္ချာဆရာမဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်သူမ၏သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယ်သူ၏ကျောင်းသားဓာတ်ပုံတွေနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်တစ်အခါသမယတွင်သူနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရှိခြင်းပါဝင်သည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေး Ginnetti ကျောင်းရဲ့အကြီးတန်းကျောင်းကပွဲမှာသူ့ကိုချဉ်းကပ်သူသူမ၏အားကစားရုံမှာထွက်အလုပ်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမေးမြန်းသောအခါ Ginnetti နှင့်အထီးကျောင်းသားများအကြားဆက်ဆံရေးကို 2013 ခုနှစ်မေလတွင်စတင်ကြောင်းယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ Ginnetti ကျောင်းသားသူမ၏ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးသူတို့တစ်တွေနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ communicate လာတယ်။
လာမယ့်လအတန်ကြာကျော်, Ginnetti စွပ်စွဲကျောင်းသားသဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခဲ့သောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီးရီးကိုစေလွှတ်။ , အဆိုပါကျမ်းသူမ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်တစ်ဦးရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူနှင့်သူမ၏အတော်ကြာလိင်ပေးသောဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူ undressing နှင့်ဖျော်ဖြေ Ginnetti ၏ဗီဒီယိုများပါဝင်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးလည်းနှစ်ခုအရှေ့မြောက် Philadelphia တွင်ကော်ဖီဆိုင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ပြီးတော့သူတို့သူမ၏ကားထဲတွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘယ်မှာအနီးအနားရှိစက်မှုဇုန်ပန်းခြံမှမောင်းကပြောသည်။ သူမသည်ထို့နောက်ကော်ဖီရိုက်ချက်မှာသူ့ကိုနောက်ကျောကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်မည်သူမဆိုပြောပြရန်မဟုတ်သူ့ကိုမေးတယ်။
လက်ထပ်နှင့်မိခင်ကလေးသုံးယောက်, အသက် 8 နှစ်, 11, 14 သူသည် Ginnetti, အသေးစားမှညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူး, ကျောင်းသားတစ်ဦး၏လိင်မှုဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအပါအဝင် 13 အရေအတွက်, ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်အပေါ်ရုံးထုတ်နှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများအကျင့်ပျက်ခြစားမှုခဲ့သည်။
သူမ၏အာမခံသူမကြိုတင်သူမ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်မှ posted ထားတဲ့ $ 50,000, ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အာမခံ၏အပိုဆောင်းအခြေအနေများသူမ၏တစ်ဦးက GPS စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတစ်ခုဝတ်ထားသူမ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် relinquishing နှင့်သူမ၏သားသမီးတို့အဘို့ မှလွဲ. သားကောင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအဆက်အသွယ်များနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူမ unsupervised အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကပဏာမကြားနာဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2014 တွင်အဘို့စီစဉ်ထားသည်
ခွက် Shot ။
ဗြိတိန်, နယူးယောက်ကနေတစ်ဦးကဆရာဟောင်းတစ်ဦးပြစ်မှု (2nd-ဒီဂရီပြစ်မှုဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူ) တွင်ပါဝငျနှင့်ကလေးတစ်ဦး၏သက်သာချောင်ချိရေးအန်တရာယျစွပ်စွဲနေပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးအဆိုအရရာခေလသည် Santora, 31, Santora ဟာ Rush-Henrietta အတွက်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်နေစဉ် 2013 ခုနှစ်ရဲ့နွေရာသီကျော်တစ်ဦးအသက် 15 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဘို့ဖြစ်စဉ်များစွပ်စွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဇန်နဝါရီလ 6, 2014 တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည် ကျောင်းစာအုပ်ခရိုင်။ သူမသည်သူမ၏ဖမ်းဆီးသည့်အချိန်တွင်, Fairport, New York မှာမွန်ရိုး # 1 BOCES နေဖြင့်အလုပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးနွေရာသီကာလအတွင်းသားကောင်သူတို့နှစ်ခုလိင်အတွက်စေ့စပ်ယုံကြည်သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသော, ကျူရှင်အဘို့အ Santora ရဲ့အိမျကိုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
Santora စွဲချက်မှသော်လည်းမလွန်ကျူးတောင်းပန်ကြ၏။ အဆိုပါတရားသူကြီး $ 20000 မှာသားကောင်နှင့် set ကိုအာမခံများအတွက်ကာကွယ်မှုတစ်ခုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Kimberly Brody ။ ခွက် Shot
ရဲ Jacksonville ရဲအရာရှိရဲ့ရုံး၏အဆိုအရဝက်အဝတ်အချည်းစည်းကားအတွင်းပိုင်းကားတစ်စီးကဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဝတ်အချည်းစည်းတွေ့ Brody ပြီးနောက်ဒုတိယအတန်းဆရာ Kimberly Brody, 40, လိမ္မော်ရောင် Park မှာ WE ချယ်ရီ Elementary School မှပေးဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးခွင့်အပေါ်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
ရဲအစီရင်ခံစာဇန်နဝါရီလ 6, 2014 တွင်, Brody တစ်သံသယရှိသူ 24 သို့မဟုတ်အထက်နှင့် 16- သို့မဟုတ် 17 နှစ်အရွယ်တစ်ဦးသားကောင်နှင့်အတူဥပဒေမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ဖော်ပြသည်။
ဂျနီဖာ Merklinger ။ ကျောင်းစာအုပ်ရုပ်ပုံ
တစ်ဦးကဟမ်းဘတ်, Pennsylvania ပြည်နယ်အထက်တန်းကျောင်းဆရာမတစ်ဦးအသက် 18 နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူသူမ၏စွပ်စွဲချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အဆိုအရဂျနီဖာ Merklinger, 40 ဒီဇင်ဘာ 2013 ကတည်းကကွာကျောင်းကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံကနေကျောင်းသားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
ကျောင်းကအရာရှိတွေသူတို့သူမ၏တရားမဝင်အပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းလက်ခံရရှိခဲ့ကွောငျးသတငျးအခကျြအပျေါမှာလှည့်ပြီးနောက်ရဲ Merklinger သို့သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 10, 2014 တွင်, Merklinger အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးသုံးခုပြစ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ သူမ၏အာမခံ $ 25000 မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
Janelle Foley ။ Facebook က
တစ်ဦးမက်ဆာချူးဆက်အလယ်တန်းကျောင်းမှာနေ့လယ်စာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လေးယောက်တစ်ဦးကမိခင်ကိုဖမ်းဆီးကာ 15 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်၏ပြဌာန်းချက်မုဒိမ်းမှုလေးရေတွက်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
ဇန်နဝါရီလ 8, 2014 တွင်, Janelle Foley, 36, Weymouth, ဖလော်ရီဒါကနေနိုဝင်ဘာလ 24, 2013, နှင့်နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာမိမိအိမ်တွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့သားမုဒိမ်းကျင့်ဖို့အပြစ်ရှိမဟုတ်တောင်းပန်ကြ၏။
အထက်တန်းကျောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များအတူတကွကြီးပြင်းကတည်းကအစိုးရရှေ့နေဒန်ယဲလ် Piccarni အဆိုအရ Foley နှင့်သားကောင်ရဲ့မိခင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသိတယ်။ Piccarni လည်း Foley နှစ်ဦးစလုံးအခါသမယပေါ်တွင်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်အတူလိင်အစပျိုးသူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါအမှု၌သက်သေအထောက်အထားသားကောင်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်ကွန်ဒုံးတွင်တွေ့အဓမ္မရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးလည်း Foley အခြားအသေးအဖွဲနှင့်အတူလိင်ခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
သူမ၏လွှတ်ရာအခြေအနေများအောက်တွင်, Foley တစ်ဦးက GPS ခြေရာခံစက်ကိုဝတ်ဆင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းအကဲဖြတ်ရှိသည်နှင့်သားကောင်သို့မဟုတ်သူ၏မိဘများသို့မဟုတ် 18 နှစ်အောက်မဆိုကလေးနဲ့အတူမည်သည့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်မဟုတ်, မ မိမိသူငယ်အပါအဝငျ။
အဆိုပါနာဇီအနိမျ့မွငျးစီးစ - NLR
Manson နောက်သို့လိုက်လော့ Leslie ဗန် Houten ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
Carly Brucia ၏လူသတ်မှု
ဘယ်လိုစီစီ၏စိန့်ဖရန်စစ် Birds ဂိမ်းတစ်ခုဒေသနာဟောပြောခဲ့သလား
သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစာသားသို့မဟုတ်စာလုံး Size ကိုကူခြင်းသို့မဟုတ်သေး Make
Skanda Sashti သခင်ဘုရား Subramanya ၏ပွဲတော်
ဇီဝဗေဒ prefix နှင့်နောက်ဆက်: meso-
ဟိုဆေး၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ "Pepe" Figueres
ဘယ်လို5ခြေလှမ်းများအတွက်စာစီစာကုံးရေးရန်မှ
ဘယ်အချိန်မှာကလေးများဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်း Start မှတစ်ဦးကောင်းခေတ်လား?
FRP ဖွဲ့စည်းမှု၏ Properties ကို
အီတလီ Tattoos ထာဝစဉ်ရှိပါသလား
မာကု၏အဆိုအရအဆိုပါဝငျကမျြး, အခနျး 3
TMS သည် Mindbody နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု
Michelle Wie အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ပထမခရစ်ယာန် Nation ကဘာလဲခဲ့သလား
ဘွန် Anniversaire: ပြင်သစ်အတွက်မင်္ဂလာမွေးနေ့
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့မော်တော်ကားအရေးပေါ် Kit ထဲမှာပါဝင်စေရန်
ပြင်သစ်တွင် "Fair" နှင့် "Rendir" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
ကောင်းကင်တမန်မင်းမိက္ခေလသည် Souls အလေးချိန်
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတွက်အမျိုးသား Accounts ကို၏အဓိပ်ပာယျ
လေး-တစ်နှစ်တာမစ္စစ္စပီကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်